Mmejọ San Andrés: ihe ọ bụ, njirimara na ihe egwu | Netwọk Mgbasa Ozi
San Andrés kpatara
Portillo nke German | 30/07/2021 10:00 | Geology
Ọdịdị ọdịdị ala nke jikọrọ ọnụ nke ụwa anyị nwere ọtụtụ ụdị ala. Otu n'ime ha bụ ọdịda. Mmejọ kacha mara amara n'ụwa bụ San Andreas kpatara. Ọ bụ otu n'ime ama ama ama na otu n'ime mwepụ siri ike ọ nwere na ụwa niile na ọ bụ ya na-ebutekarị ala ọma jijiji dị elu.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mmebi San Andrés, kedu ihe kpatara ya na kedu ụdị mmejọ ndị dị.
1 Gịnị bụ ọdịda
2 Ihe kpatara ala ọma jijiji
3 Ụdị ọdịda
4 San Andrés kpatara
5 Mgbanwe nke mmebi nke San Andrés
6 Ihe egwu nke mmejọ San Andreas
Gịnị bụ ọdịda
Mmejọ nke ọdịdị ala bụ ntụpọ ma ọ bụ mpaghara mepere emepe n'etiti nkume abụọ n'ime eriri ụwa. Ọ bụ nkwụsị nke etinyere site na mgbawa nke nnukwu nkume abụọ n'ihi ike tectonic karịrị ike ha. Nke a na-akpata mmịpụ n'etiti ibe ha. Ọdịda nwere ike ime ngwa ngwa ma ọ bụ nwayọ nwayọ, ọ nwekwara ike ịbụ millimita ole ma ole ma ọ bụ puku kilomita.Dịka ọmụmaatụ, a na -ahụta mmejọ San Andreas ka ọ bụrụ mmebi kacha dị ize ndụ n'ụwa.
Tupu ihe owuwu ọ bụla amalite na ala na -emepebeghị emepe, ndị ọkà mmụta ala ga -enyocha ala iji chọpụta ma ọ dị mma maka owuwu. A na -ahụ ụfọdụ mmejọ nke ọma, mana ka oge na -aga, mmejọ ndị ọzọ nwere ike bụrụ ihe edoghị anya. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile ka edepụtara dị ka ihe dị ize ndụ, enweghị ike ịkọgharị ngagharị nke ala a "ọnya".
Ihe kpatara ala ọma jijiji
Ike ndị sitere n'okike sitere na njupụta nke ụwa na -ebute ngagharị nke okwute ma ọ bụ nnukwu ebe nke efere tectonic. Ọnụ ya na ngwakọta nke efere ndị a jupụtara na bumps, ike ike na enweghị ike, nke na-ebelata ọsọ nke ije ma na-agbakọta ume.
A ghaghị ịtọhapụ ume a chịkọbara n'otu oge, yabụ na ọ ga -agbaji na mberede wee daa n'ihi ịdị arọ na ike ndọda. N'ikpeazụ, ndokwa nke efere na-anọchi anya seismic mmiri na ebili mmiri.
Omume a niile anaghị ahụ ya mgbe ụwa dị n'ụdị ala ọma jijiji na-eme ihe ike, belụsọ na ngagharị ahụ dị oke ọsọ ma mgbochi ahụ na-amịpụta ole na ole.
Enwere ụdị ọdịda atọ dị n'ụwa. Ka anyị hụ ihe ha bụ:
Ntụgharị: Ha bụkwa mmejọ mmịfe kwụ ọtọ, ihe dị iche bụ na ngọngọ ụlọ na -aga n'ihu na ngọngọ nke ọzọ. Ike ndị a na-ebute n'ụdị mmejọ ndị a buru ibu, nke pụtara na a na-emegharị mgbochi abụọ ahụ n'ebe ibe ha nọ, na-eme mgbawa.
Nkịtị: Ọ bụ slide site na nmikpu ebe otu ngọngọ dị ala karịa nke ọzọ. Nke ahụ bụ, ọ bụ vetikal ije. Ọ na -esite na mgbatị tectonic ma ọ bụ nkewa. Typesdị mmejọ ndị a na-adịkarị ntakịrị, na-ewepụ ihe dị ka otu mita, mana enwere ndị ọzọ na-agbatị maka iri puku kilomita.
Kwụ ma ọ bụ ịpịgharị: Dị ka aha ahụ na -egosi, mmegharị ahụ kwụ n'ahịrị, yiri ntụzịaka ahụ. Ọ nwere ike ịkwaga n'aka nri, nke a na -akpọ ntụgharị ziri ezi, ma ọ bụ nwee ike ịkwaga n'aka ekpe, nke a na -akpọ synastral.
Ihe kacha mụọ ma mara ama ama ama ama ama ama bụ San Andrés kpatara, nke mepụtara ala ọma jijiji n'ihi ịgbaga n'aka nri ma ọ bụ dextral ije.
N'April 18, 1906, ụwa lebara anya na ihe kpatara San Andreas. Mwepụ nke ihe kpatara kpatara oke ala ọma jijiji na San Francisco, United States, na-egbu ihe karịrị mmadụ 3.000.
Nsogbu San Andreas bụ nnukwu ntụpọ dị n'ime ala, ihe dị ka kilomita 1.300 n'ogologo, nke si na nsọtụ ugwu nke Ọwara California wee gafee ọdịda anyanwụ California na United States. Mmegharị tectonic nke nde afọ 15-20 a dekọrọ dọtara mmasị ọha n'ihi oke ala ọma jijiji ahụ. Mgbe ụbọchị ahụ gasịrị na 1906, na 1989 na 1994, ọdịda ahụ gosiri n'ụzọ doro anya na ọ ga -aga n'ihu na -arụ ọrụ.
San Andrés abụghị naanị mmejọ ọ bụla. Ọ na -anọchite anya nnukwu efere abụọ nke eriri ụwa: efere Pacific na efere North America. N'adịghị ka United States, efere Pacific na -ada n'akụkụ. Ya mere, a na-ekewa ya dị ka mmịfe ma ọ bụ ọdịda mwepụ.
Mgbanwe nke mmebi nke San Andrés
Mmejọ a emeela ọtụtụ mgbanwe n'oge ịdị adị ya, na -akpụgharị naanị sentimita ole na ole n'afọ, ọ na -agbada na 6.4 m na ala ọma jijiji nke 1906. Ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na -eme nyocha ha achọpụtala ngagharị kwụ ọtọ.
N'ọmụmụ ihe ndị ọzọ ugbu a, a chọpụtara na mmejọ San Andreas dị nso na Parkfield, California nwere ala ọma jijiji nke ihe dịka ogo isii kwa afọ iri abụọ na abụọ. Ndị na -ahụ maka ala ọma jijiji buru amụma na ọ ga -eme otu ugboro n'afọ 6, mana ọ meghị ruo n'afọ 22. N'ikwu ya n'ụzọ sayensị, nke a bụ ọnụọgụ kacha nso, yabụ mpaghara California a rụrụ ọrụ nyocha dị mkpa gbasara ala ọma jijiji na akparamagwa ha.
Ihe egwu nke mmejọ San Andreas
San Andrés Fault bụ akụkụ nke Mgbanaka Ọkụ nke Pacific, nke na-ekpuchi ihe karịrị kilomita 40.000 nke ebe nwere ala ọma jijiji na ọrụ mgbawa. Mpaghara ọkụ ma ọ bụ mgbanaka ọkụ sitere na New Zealand ruo South America, na ókèala Japan n'akụkụ ugwu, Oletian Trench, na North na Central America.
Ọ dị nso na mpaghara mmejọ San Andreas bụ California, yanakwa obodo pere mpe nke ọnụọgụgụ mmadụ bi iri atọ na asatọ. Ndị ọkachamara na -adọ aka na ntị na ala ọma jijiji nke tectonic ngagharị nke efere efere ga -ebibi. Otú ọ dị, ndị mmadụ kwesịrị ịkwadebe maka ịma jijiji dị nwayọọ ma na-abịakarị. N'otu aka ahụ, a na -ewu ụlọ, àkwà mmiri na okporo ụzọ kachasị ọhụrụ iji guzogide ala ọma jijiji wee banye ebili mmiri. Ọ gaghị ekwe omume ịkọ ala ọma jijiji ahụ n'ezie, mana nke bụ eziokwu bụ na San Andrés ka dị ndụ.
Egwu kacha echegbu ndị ọkà mmụta ihe banyere ala sitere n'akụkụ ndịda. Nnyocha ala na -egosi na e bibiri ebe ugwu na 1906 wee mebie akụkụ etiti ya afọ 160 gara aga, mana ndịda na -eche onye ọ bụla nche..
Enwere ala ọma jijiji na mpaghara ndịda ihe dị ka afọ 150 ọ bụla, mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 300 gafere na -enweghị ndekọ mmegharị ọ bụla. Ya mere, ozugbo a tọhapụrụ ya n'èzí, nchịkọta ume nke dị n'okpuru nwere ike imebi ihe. N'ọnọdụ nke nnukwu ala ọma jijiji nke nwere ọkwa Richter karịrị ogo 7, ọnụ ọgụgụ ndị Los Angeles ga -emetụta nke ukwuu, ebe ọ dịkarịa ala mmadụ 2,000 nọ n'ihe egwu ọnwụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mmejọ San Andrés na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » San Andrés kpatara
Kedu ihe bụ anemometer